အင်တာနက်မီးကိုဘယ်သို့သုံးရပါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အင်တာနက်မီးကိုဘယ်သို့သုံးရပါ့
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Dec 17, 2012 in Creative Writing, Short Story | 24 comments
ဌာနခွဲမှူးကရုံးခန်းထဲသို့စိတ်တိုသောမျက်နှာထားနဲ့ဝင်လာသဖြင့် ၀န်ထမ်းအားလုံး မျက်နှာပိုးလေးတွေသေနေကြရသည်။အထူးသဖြင့် သွေးသန့်တို့လိုဝန်ထမ်းငယ် လေးတွေက ပို၍ထိတ်လန့်နေကြရတာပင်။
တစ်ခန်းလုံးက၀န်ထမ်းအားလုံးကွန်ပျူတာတာဝန်ရှိသူတွေမို့ အားလုံးမင်သက်ငေးမော သွားသည်။
“အခုရက်ပိုင်း အလုပ်လုပ်တာကိုအကြောင်းပြပြီး အင်တာနက်ကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အတွက်တော်တော်လေးသုံးနေကြတယ်မို့လား”
ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာလည်းအဲဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်လူကြီးပိုင်းတွေတော်တော် စိတ်ပျက်နေကြရတယ်။အစိုးရဌာနတွေကတော့ထားပါ တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး ဒီတော့ ခင်ဗျား တို့ရှေ့လျှောက်ဒီလိုတွေအကျင့်ပျက်နေကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်အလုပ်ကျွမ်းကျင် တဲ့လူဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ပစ်ဖို့ဝမ်နင်ပေးခဲ့လိုက်မယ်”
ဌာနခွဲမှူးထွက်သွားသည်အထိ အားလုံးငြိမ်သက်မပြေကြသေး အတော်ကြာမှ အသက် အကြီးဆုံးအန်တီသီတာကစ၍
“ကဲ…ကလေးတွေကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်..ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကိုယ်အသိဆုံး ဖြစ်ကြမှာပေါ့ ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ အန်တီတို့ကစိတ်မကောင်းရုံပဲတတ်နိုင်မှာ”
အန်တီသီတာရဲ့စကားအဆုံးခေါင်းမဖော်နိုင်သူတို့မှာ သွေးသန့်တို့ မိန်းကလေးငယ် တစ်စုသာဖြစ်သည်။
သွေးသန့်အကြောင်းကိုပဲသီးသန့်ပြောရရင် ရုံးတက်ချိန်ထက် တစ်နာရီနီးပါးလောက် စောပြီး သွေးသန့်ရုံးခန်းထဲရောက်တတ်သည်။
“စောလှချည်လား သွေးသန့်စင် ရဲ့”
အမှန်က ဌာနအတွင်းကကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်သည်နှင့် ပထမဆုံးဖွင့်တာက ပါစင်နယ်ဂျီမေးလ်။ပြီးလျှင် ဂျီတော့မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ပွားလိုက်တယ်။ မတွေ့ရင် ဆိုရှယ်ဆိုဒ်တွေထဲဝင်လျှောက်ကြည့် chat ခန်းတွေမှာဝင်ပြောချင်ပြော ဘလော့ပို့စ်တွေလိုက်ဖတ် မိမိကိုယ်တာတွေချည့်လျှောက်လုပ်တော့တာပင်။
အဲဒီအချိန်တစ်ယောက်ယောက်ရုံးရောက်လာပြီဆိုမှဖြင့် လုပ်လက်စအလုပ် လေး တွေဖွင့်ပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်၊လူလစ်ရင်လစ်သလိုTab တွေပြောင်းဖွင့်လိုက်နဲ့ နေ့စဉ် အွန်လိုင်းကမ္ဘာမှာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းလာခဲ့တာကြာပြီပေါ့။
အစပိုင်းကတော့ စီနီယာတွေက သတိပေးတာမျိုးတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ကြပါသေးတယ်။
အဲလိုသတိပေးရင် သွေးသန့်တို့မိန်းကလေးငယ်တစ်စုက တီးတိုးတီးတိုး အတင်းပြော တတ်ကြတာကြောင့် အမုန်းခံပြီးသိပ်မပြောရာမှ အခုလို ဌာနခွဲမှူးသိပြီးဆူပူသွားတဲ့ အထိကျယ်ပြန့်သွားခဲ့သည်။
အခုလိုသတိပေးစကားတွေအကျယ်တ၀င့်ပြောလာတာဟာ သွေးသန့်တို့အုပ်စုအတွက် ဆိုတာမည်သူမဆိုသိနိုင်တာပင်။ရှက်လိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့တော့။ကိုယ်တွေကမှ အလုပ်မဟုတ်တာဆိုတော့ ပြန်ဖြေရှင်းစရာလည်းစကားမရှိ။
ဒီထက်ပိုဆိုးတာက သွေးသန့်တို့တစ်စုကို သေသေချာချာစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်စီနီယာ အသစ်အန်တီသီတာနဲ့လူစားလဲပြီးတစ်ယောက်ကို ဌာနပြောင်းလွှတ်လိုက်သည်။
အန်တီသီတာနဲ့ဆန့်ကျင်စွာအလွန်မာန်ခက်ထန်တဲ့ပုံစံရှိပြီး မျက်မှန်ကိုကျော်ကြည့် တတ်တဲ့မျက်လုံးကြီးတွေက သွေးသန့်တို့တစ်စုကိုစားတော့ဝါးတော့မယောင်။
အရင်တည်းက ပါစင်နယ်ကိစ္စကို အနည်းအကျဉ်းသာသုံးစွဲတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ချို့ကတော့ စောင့်ကြည့်သတိထားခြင်းမခံရပဲ ပုံမှန် ရုံးအလုပ်လုပ်လိုက် ပါစင်နယ်လေးဝင်ဝင်သုံး လိုက်နဲ့ အဆင်ပြေနေဆဲပါ။
အခုဆိုရင် သွေးသန့်တစ်ယောက် အင်တာနက်ကိုအစွဲကြီးစွဲနေတာမို့ မသုံးရရင်မနေနိုင် တော့ပါ။
ရုံးဆင်းချိန်ကလဲညနေ ၆နာရီ ကားကျပ်ကျပ်ကိုစီးရတာနဲ့ အိမ်ပြန်ရင်ရေမိုးချိုး ကိုချိုးမှရသည်။
ရေချိုးပြီးပြန်တော့ ထမင်းမစားရင်အမေက ပွစိပွစိမို့ သွေးသန့်ကိစ္စတွေ အားလုံးပြီးချိန်မှာ အစောဆုံးတော့ ည၈နာရီလောက်ရောက်သွားတတ်သည်။
အဲလိုအချိန်မှာ လမ်းထိပ်ထွက် အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်ပြန်တော့ ည၉နာရီလောက်ဆိုရင် မျက်စိကမှေးချင်နေပြီ။မျက်စိကမအိပ်ချင်ပဲ ဇွဲကောင်းနေရင်တောင်မှ မနက်ဆိုမထချင် တဲ့မိမိကိုယ်မိမိ သိနေတာကြောင့်ပြန်ကိုအိပ်မှရသည်။
ဆက်ပြီးပေတေနေပြန်ရင်လဲ ၉နာရီခွဲလောက်ကျ အမေက အင်တာနက်ဆိုင်ကို လိုက်ချ လာတတ်တာမို့ ၉နာရီကျော်တာနဲ့ပြန်ကိုပြန်ရတာပင်။
အရင်က နေ့စဉ် တစ်နေကုန်နီးပါး အွန်လိုင်းပေါ်ရှိနေရာမှ တစ်နေ့ တစ်နာရီကျော် အောင်တောင်မသုံးနိုင်ရှာတဲ့ သွေးသန့်ကို အွန်လိုင်းဘော်ဒါတွေကတောင် မေးလာပြီ။
ဒီကြားထဲသွေးသန့်စင်ကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတာက လမ်းထဲကဆယ်တန်းဖြေပြီး လတ်လျား လတ်လျားဖြစ်နေတဲ့ ခင်မီမီဆိုတဲ့ကောင်မလေးသတင်းပါ။
“ကိုဘိုထွေးသမီး မီမီရယ်ပေါ့ အင်တာနက်မှာတွေ့တဲ့ကောင်နဲ့အပြင်မှာချိန်းတွေ့တာ ဟိုကမတရားကြံလို့ ရဲစခန်းရောက်ဘာရောက်နဲ့ ဂျာနယ်သမားတွေတောင်အိမ်လာပြီး မေးမြန်းကြတာဆိုပဲ ကိုဘိုထွေးတို့များအရှက်တွေကွဲလိုက်တာ”
ဒါပေမယ့် အဖေနဲ့အမေက စိုးရိမ်ကြီးလွန်းတာကတစ်ကြောင်း၊ခင်မီမီနဲ့သွေးသန့်က အသက်ခြင်းသိပ်မကွာတာကတစ်ကြောင်းမို့ သွေးသန့်ကိုပါ ညဘက်အင်တာနက်ဆိုင် မသွားစေချင်တော့။
အတင်းအကျပ်မတားပေမယ့် သွေးသန့်သွားရင် အမေကပါ အဖော်လိုက်မည်ဟုဆို လာရာ…သွေးသန့်အနေနဲ့သွားချင်စရာကောင်းပါ့မလားစဉ်စားကြည့်ပါလေ။
သွေးသန့်အတွက် အင်တာနက်နဲ့ပိုလို့ ပိုလို့ဝေးရတော့မလား။
ဒီနေ့တော့ မျက်နှာပေါက်ဆိုးလှတဲ့ စီနီယာ အန်တီကြည်ကဆိုလာသည်။
“မင်းတို့ကအခုလို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်လာရတာ မင်းတို့အမှားမင်းတို့နားလည် ကြမှာပေါ့”
“လူကြီးတွေအနေနဲ့ မင်းတို့ကို အင်တာနက်သုံးစေတာ ရုံးကိစ္စအီးမေးလ်စစ်ဖို့၊မေးလ် တွေပို့ဖို့တင်မက မင်းတို့အနေနဲ့ အင်တာနက်မှာ ဗဟုသုတတွေရှာမှီးဖို့၊အကျိုးရှိတာ တွေဘယ်လောက်အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာသိချင်လို့ပဲ။
ဒါပေမယ့် မင်းတို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာတော့ မင်းတို့ကိုယ်တိုင် အသိဆုံးနေမှာပါ။ဒီတော့ ဒီနေ့ကစပြီး မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံမလဲဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ကိုရုံးအလုပ်ကလွဲပြီး လုံးဝမဖွင့်ရဲတဲ့သူတွေကိုပြောမယ်။
အရင်လိုပဲအားရင်အားသလို ပြန်သုံးပါ။ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ များများအသုံးချရမယ် ဆိုတာတော့ မင်းတို့နားလည်လောက်ပါပြီ။အန်တီ့ကိုမုန်းနေကြမယ်ဆိုရင်လည်း အန်တီစိတ်မဆိုးပါဘူး။ဒါပေမယ့် မင်းတို့ကိုတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ
ကဲ…အခုသဘောပေါက်မှာပါနော်။မင်းတို့ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ အဓိကက အချိန်ကို ဖြုန်းမှာလား? သုံးမှာလား? ဆိုတာအန်တီတို့ကြည့်ချင်တယ်
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အန်တီ့ရဲ့သမီးတွေလိုကိုယ်ချင်းစာပြီးပြောမှာပါ အင်တာနက်ဆိုတာ မီးလိုပဲ သုံးတတ်ရင်ဆေး၊မသုံးတတ်ရင်ဘေး ဖြစ်သွားတတ် ပါတယ်”
အန်တီကြည်ကအခုလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြောလိုက်ချိန်မှာ သွေးသန့်တို့တစ်စု တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်မိကြသည်။သွေးသန့်တို့အတွေးကိုယ်စီမှာ တော့အန်တီကြည်ရဲ့စကားအပေါ်နားလည်လက်ခံမယ့်သူရှိသလို၊ဆန့်ကျင်ဖီဆန် မယ့်သူလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါမယ်။တစ်ယောက်ချင်းစီ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲဆိုတာ တော့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်သိကြရမှာပါ။
အချိန်ကိုဖြုန်းမှာလား? သုံးမှာလား? ဆိုတဲ့ စကားကတော့ သွေးသန့်နားမှာ အထပ်ထပ် ကြားယောင်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့အားယူလိုက်ပါတော့တယ်။
(ဒီဝတ္ထုတိုလေးက ဂေဇက်ကလွဲရင် တခြားဆိုက်တွေမှာတင်ပြီးသားပါ။သိပ်အားမရလို့ ရွာထဲမတင်ဘူးလို့ထားတာ
လုံမလေးမွန်မွန်က တင်ပါအစ်မရဲ့ ဆိုတာနဲ့ တင်လိုက်ရပါတယ်။)
Internet ဆိုတာကတော့ အခုစာထဲမှာပါခဲ့သလိုပါပဲ သုံးတတ်ရင် မိမိလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ
အခြားဗဟုသုတရှာမှီးဖို့ ဖြစ်စေ အခြားအခြား အကျိုးပြု့မှုတွေများလှပါတယ်။
ဒါပေသိ မသုံးတတ်ရင်တော့ အချိန်ကုန် ငွေကုန် မျက်စိမှုံ ရုံတင်မက အခြားအခြားသော
ဆိုးကျိုးတွေက များလှပေတာမို့။ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချတတ်စေဖို့ မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်သင့် သလို
မိမိအနီးအနားမှာရှိတဲ့ လူငယ်များကိုလဲ သွန်သင်ဆုံးမမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Internet ကိုအကျိုးရှိလား မရှိလားတော့မသိ အိပ်ချိန်စားချိန် ဝေယျာဝစ္စ ပြုလုပ်ချိန်မှလွဲ၍
အချိန်ပြည့် အသုံးပြုနေသော mobile :harr:
ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြော ဒီရွာထဲက လူတွေကတော့ အင်တာနက်မီးကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ လူတွေချည့်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။
အမှန်က ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ပိုသင့်တော်တာပါ။
ပထမဆုံးမန့်သွားတာကို ပထမဆုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်.. :hee:
ဟုက်ကဲ့ပါခင့်ဗျ ကျနော် သည်လည်း ဆယ်ကျော်သက်ပေမို့
သွန်သင်ဆုံးမစရာရှိရင် သွန်သင်ဆုံးမ ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ပို့စ်ကိုများ စိတ်တိုင်းမကျဘူး ဆိုပါလား
ဦးမာဃတို့ အတွက် ပညာပေးပို့စ်ပါ
ဦးမာဃကတော့ အင်တာနက်ကို စ သုံးကတည်းက ပညာရှာဖို့ရယ် စကားပြောဖို့ရယ်ကို မျှသုံးတယ်
အခုတစ်လောတော့ ဖွဘုတ်ကို နည်းနည်း ပိုသုံးဖြစ်နေတယ်
အမှန်တော့ အင်တာနက်ဆိုတဲ့မီးကလေးရှိလာလို့ အစ်မတို့ရဲ့ဝါသနာတွေကိုအခုလိုချပြခွင့်ရနေတာပါ။
ပုံနှိပ်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမှမြင်ရမယ်ဆိုရင် “ဘယ်ချိန်၊ဘယ်ခါမှန်းလဲမသိကွယ်..”လို့ပဲ ဆိုညည်းနေရတော့မှာပါ။
အစ်မကတော့ အင်တာနက်ဆိုတာ အစ်မအတွက် ကောင်းသောလှေကားထစ်လေးများလို့ ယူဆထားပါတယ်။
အင်တာနက် ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင် ဘေး ဆိုတာလေးကို
ဒါပေမယ့် … ဘယ်လိုဟာ ဘေး၊ ဘယ်လိုဟာ ဆေး ဆိုတာတော့
ကွဲကွဲပြားပြား သိရအောင် စာရင်း မကောက်ဖူးသေးပါဘူး ..
လူမှုကွန်ရက် သုံးတာ ဘေး ဆိုရင်လည်း မမှန်နိုင်ဘူးဗျ …
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတ်အတွက် ကျန်းမာရေး ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်
ဘေးဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလို့ မရပြန်ဘူး ……..
ဒါကြောင့် ဘယ်ဟာ ဘေး၊ ဘယ်ဟာ ဆေး ဆိုတာ .. မကွဲပြားသေးတာပါလို့ …
အင်တာနက် ဇာတ်လမ်း ပို့စ်လေးကို အားပေးသွားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ……
ဘေးတွေကတော့ လူမှုကွန်ယက်တွေသုံးတာကိုမဆိုလိုဘူးနော်..ကျွန်မလည်း လူမှုကွန်ယက်တွေအတော်များသုံးပါတယ်။သဘောလည်းကျတယ် မိတ်ဆွေလည်းပေါတယ်။
မသုံးတတ်တဲ့ဘေးဆိုတာက အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေ ဗွီဒီယိုချတ်တာတွေ၊
အမြင်မတော်တဲ့ပုံတွေပြခိုင်းတဲ့ယောကျာ်းတွေကြောင့် ပြဿနာတွေတက်ရတာ စတဲ့ အင်တာနက်သုံးသူတိုင်းနားလည်လောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။
(အမှန်က အန်ဇာတုံး ကိုဒီလိုရှင်းပြနေစရမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ် ကျွန်မကိုအစ်နေတာများလား :harr:)
အဲ…အင်တာနက်ဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရရှာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်း ပြိုင်ပွဲဝင်ထားဆဲ ရသစာလေးရှိပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကာလပြီးမှ တင်လို့ရမှာမို့ပါ။
အစ်ရဘာဘူး အမနန်းရယ် …
သားသားဂ ဂယ် မသိရို့ ကြောဒါဘာ .. ငွင်းး ငွင်းး
ဟိုအမျိုးသမီးရဲ့ ပြိုင်ပွဲဆိုဒါလေးဂို စိတ်ဝင်စားဒါးးး
ဒါ့ထက် .. အဲ့အမျိုးသမီးဂ အကျိုလေးလားဟင်င် ..
သိပ်မသုံးပါဝူးကွယ်. ဘရောက်ဇာ ငါးခုတခု တက်ဘ် အခုသုံးဇယ်ကျော်နဲ့
တနေ့ ၁၆နာရီထဲ သုံးတာပါ.
၁၅ရက်နေ့ကစလို့ tethering ရသွားပီမို့. ရထားစီးတဲ့ချိန်တွေတောင် တက်ဘလက်နဲ့ သုံးနေအုံးမှာပါ
ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ခေါ်ကြတယ်.
အားလုံးပေါင်း တက်ဘ်က တစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက်ပဲရှိလို့
ဟိုက ဆွဲလိုက် ဒီက ဆွဲလိက် နဲ့ အဆွဲခံနေရရှာတဲ့ RAM လေးတော့ သနားပါ့ကွယ်
ကြားမှာ ကွန်မကောင်းတဲ့နေရာဆို အော်ပရာ ကို ညွှန်းချင်တယ်ဗျို့
ဒင်းမှာက ဝက်ဆိုက်တေမှာပါတဲ့ပုံတေကို ချုံ့ပီး ဖော်ပြပေးတဲ့ တာဘို ဖီချာပါလို့
ကွန်လည်းကောင်းမယ်. စက်လည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ခရုမ်းပဲ အကောင်းဆုံး.
Ctrl+Alt+Del နှိပ်ပီး ဝင်စစ်ကြည့်ရင်
တခြား ဘရောက်ဇာတွေက တက်ဘ်တွေ ဘယ်နှခုဖွင့်ထားထား process တခုတည်းအနေနဲ့ ရွမ်းတယ်
ခရုမ်းက tab အလိုက် process ခွဲရွမ်းတယ်
ဆိုတော့ ကော်နက်ရှင်စပိကိုသာ ကွန်းစတန့်ထားဗျာ. ကျန်ဘရောက်ဇာထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ခရုမ်းက သာမယ်
လို့ ယူဆနိုင်တယ်. (စက်ကောင်းဖို့တော့ လိုတာပေါ့လေ. စလရွန် နဲ့ ဆိုရင်တော့ သိပ်အားမပေးဝူး)
ဝင်းဒိုးပေါ်က သုံးတာဆိုရင် (မက် မဟုတ်ရင်) ဆာဖာရီကိုတော့
ကျုပ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ပတ်က. အဲပဲလ် ဒက်ဗလော့ပါ ပရိုဂရမ် ဝင်တာ.
အော်. ပန်းသီးပဲလေ ဆာဖာရီလေးနဲ့ဆို ပိုအိုကေမှာပဲ ဆိုပီး ဒင်းနဲ့ဖွင့်တာ.
တောက်တလွဲ. တွေချည်း ချပြတာ. အံ့ရော
ခရုမ်းန် နဲ့မှ အိုကေသွားတော့တယ်.
Firefox က… အောက်က Extension မျိုးသုံးတာ.. တွေ့ဖူးတယ်..
နန်းတော်ရာသူ ရဲ့ စာ ဟာ တစ်ကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ရီးရဲလစ်ဇင် မို့ကြိုက်မိပါတယ်
စာထဲပါအကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရင်းနဲ့၊ ကိုယ်အင်တာနက်စသုံးခဲ့မိတဲ့အချိန်ကို ပြန်သတိရမိတယ်
ကျုပ်နဲ့ ကတော့ပြောင်းပြန် ၊ အင်းဂလိရှ် ကို ကောင်းကောင်းလေ့လာချင်လို့မသုံးတတ်ပဲ စမ်းသုံးရမ်းသုံးရာကနေ ၊ အင်းဂလိရှ် ကို မလေ့လာဖြစ်တော့ပဲ ၊ ဆိုရှယ်ဆိုက်ဒ်တွေမှာပဲ ပျော်ခဲ့မိတာကလား
အင်တာနက် မှာ လူကိုမမြင်ရတော့ ပေါရဲကြ ပြောရကြတယ်။
တစ်ခုလပ် ကလေးအဖေက လဲ လူပျိုတွေထက်တောင်ကြူပြနိုင်တယ်။
အိမ်ထောင်ပျက်နေတဲ့ ကလေးအမေ မိန်းကလေးက လဲ အပျိုရှုံးလောက်အောင်မူနိုင်တယ်။
မြန်မာစကားပုံလို ပြောရရင် ဂျိုကုတ်ရှိရာ ဂျိုထောင်မလာဘူးတဲ့။
အင်တာနက်သုံးလို့ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာတော့ လက်မခံပါ။
ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းက နေရာတကာမှာ ရှိနေပါတယ်။
ဆော်လေးတစ်ပွေကို ကြူနေဒါ တွေ့ဘာဒယ် ..
အိုက်ဒါ ဘယ်လို ပြောလို့ ရမလဲ ..
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပေါက်ရေ ကျွန်မရေးတဲ့အထဲမှာတော့ (အင်တာနက်သုံးလို့ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာတော့ )
အဲလိုသာဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်မတို့လို ရေးတဲ့လူတွေတောင် အွန်လိုင်းတက်မိတော့မယ်မထင်ပါ။
အင်တာနက်သုံးလို့ပျက်ဆီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မလည်း ကိုပေါက်နည်းတူလက်မခံပါ။
ကျန်ာသူများပိုစ်ကို သေချာမဖတ်ဘဲ မန်းလေ့မရှိပါ.
မြန်မာပြည်မှာ ဘုမသိဘမသိ အလန့်တကြားထထ အော်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။
အရပ်ထဲမှာ လူကြီးအတော်များများကြားမှာ အင်တာနက်သုံးရင် ပျက်စီးတယ်လို့ထင်တတ်ကြတာကိုတွေးမိပြီး
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က လဲ အသက် 50 ကျော်မှ အင်တာနက်ဆိုတာကို ကျနော့် တပည့်တွေဆီက သင်ယူခဲ့ပြီး ကလေးတွေအင်တာနက်သုံးဖြစ်အောင် ဆွဲခေါ်နေတဲ့လူပါ။.
ခင်ဗျားရေးတဲ့ ထဲ မပါတာကို ၀င်မန်းမိတဲ့အတွက်အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ ကိုပေါက်ရေ .. .
မနန်းတော်ရာသူက ရွာထဲကို ၀င်လို့မရလို့ပါတဲ့။ ဖေ့ဘုတ်မှာ ကျနော်ကို
အကူအညီတောင်းလို့ ကျနော် တဆင့်ပြန်မန်းပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(ကျွန်မပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျေးဇူးပါကိုပေါက်ရေ..ကျွန်မက
ကျွန်မ၀တ္ထုဟာ အင်တာနက်သုံးတာကိုအပြစ်တင်ထားတဲ့စာလို့ ကိုပေါက်များထင်ပြီးမန့်လိုက်သလားလို့ပါ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း
(ခင်ဗျားရေးတဲ့ ထဲ မပါတာကို ၀င်မန်းမိတဲ့အတွက်အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်)
နက်ကို အလုပ်မှာ ခိုးသုံးရတာပြောပါတယ်
ပြင်သင့်တာ ပြင်ဖ်ို့ 
ယူအက်စ်မှာ.. ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ချိန်အင်တာနက်သုံးတာ.. တော်တော်ကြီးတဲ့ပြသနာပါ..။
အစိုးရအလုပ်..ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖိုင်းယားဝေါထဲ..ပေါ်လစီတွေထားပြီး.. ဖေ့စ်ဘုတ်.တွစ်တာ…ဂျီမေးလ်စတဲ့ ဆို၇ှယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ အကုန်ဘန်းထားတယ်..။
ဒါလည်းပဲ.. တာဝန်ချိန်မှာ..ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့.. အင်တာနက်..တက်စ် စတာတွေလုပ်လွန်းလို့.. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြပါ၇ဲ့..
နောက်တခု.. ဆန်းတာပြားတာပြောရရင်.. အင်တာနက်ကနေ.. ဟက်ကာက.. လူသေအောင်လုပ်လို့ရနေပြီတဲ့ဗျ..။
… ဟက်ကာက..အင်တာနက်ကနေ ဆိုင်ဘာဘူလီလုပ်တာ.. စိတ်ညစ်ပြိး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသူအကြောင်းပေါ့..။
အဲဒါ.. မြန်မာဇတ်လမ်းလုပ်ေ၇းရင်.. အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစ၇ာ
Hackers Identify Alleged Cyberbully Who … – Huffington Post
Oct 16, 2012 – …a15-year-old Canadian girl who committed suicide after suffering … Bill Murray Explains Why He Doesn’t Do Funny Movies Anymore347 …
ဒို့ဘဂျီး ကြွမသွားတာ ကံကောင်းတယ်လို့ မှတ်ရမယ် ..